Ọhụrụ BIM mbipụta: BIM na asụsụ doro anya - Geofumadas
Disemba, 2017 ọtụtụ
Entlọ ọrụ Bentley Press Institute, onye mbipụta akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche na ọrụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nke raara nye ọganihu nke BIM metụtara n'akụkụ dị iche iche dịka ije, injinia, iwu, arụmọrụ, ọdịdị ala na agụmakwụkwọ, kwupụtara taa nnweta nke aha ọhụrụ gị, BIM na asụsụ dị mfe, ugbu a dị ka mbipụta ebipụta yana dị ka eBook maka ngwa ọdịdị na iOS ngwaọrụ.
Vinayak Trivedi, onye isi oche nke ụlọ ọrụ Bentley kwuru, sị, "Anyị nwere obi ụtọ inye ọha mmadụ aha a nke Bentley Press Institute na-eche ogologo oge: BIM na asụsụ dị mfe nke Iain Miskimmin, otu n’ime ndị ọkachamara anyị si BIM Advancement Academy. Na mgbakwunye a na ọba akwụkwọ anyị, Bentley Press Institute na-aga n'ihu na ozi ya iji bulie ọrụ dị iche iche site na mbipụta ụwa maka akụrụngwa, dị na mbipụta na usoro dijitalụ. Akwụkwọ ndị a na-akwalite nkwukọrịta n'etiti ụlọ ọrụ, ndị nchọpụta, na ụmụ akwụkwọ, ma dabere na mkpokọta Bentley nke ihe karịrị afọ 30 na ụlọ ọrụ akụrụngwa.
Dika BIM na emeziwanye ikike ijikwa, mepụta ma rie ozi sitere na akụrụngwa akụrụngwa (imepụta, iwu, arụmọrụ na ndozi) n'oge ndụ ha niile, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke gọọmentị gburugburu ụwa na-achọ ruo BIM Ọkwa 2 ardskpụrụ yana nnyefe maka ọrụ ndị a ga-enweta ego ọha na eze. Mmezu nke oma nke atumatu BIM nwere ike ibute oke onu ahia, imeziwanye ihe, na nsonaazụ kacha mma na oru ngo. BIM na asụsụ dị mfe Ọ bara uru maka ndị na-amalite na ndị nwere ahụmahụ na atụmatụ BIM iji jide n'aka na ndị ọkachamara niile dị njikere nke ọma ịbụ akụkụ nke mgbalị nke ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na ịkwalite BIM.
BIM na asụsụ dị mfe kwadoro ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na ihe mmụta site na Bentley Institute BIM Advance Academy. Ọ na-eduzi onye na-agụ ya site na ọtụtụ ihe mgbagwoju anya nke usoro BIM site n'inye, site na asụsụ dị mfe, nghọta nke echiche na ụlọ ndị a chọrọ iji nweta usoro dị irè. Gosi ihe mere nchịkọta data banyere akụnụba dị oké mkpa maka usoro BIM, na ihe kpatara ozi a pụrụ ịtụkwasị obi na nke a pụrụ ịdabere na ya, dị mkpa iji mee mkpebi dị irè: melite, abawanye, gbanwee, wepụ ma ọ bụ hapụ akụ dị ka ha dị.
BIM na asụsụ dị mfe Ọ na-enyochakwa ihe atọ n'ịmepụta omume BIM dị mma: ndị mmadụ, usoro, na teknụzụ. Kọwaa otu nchikota ihe ndị a na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro ọrụ nnabata na ịbute nsonaazụ ka mma. Akwụkwọ ahụ na-enyocha 'ogidi asatọ nke amamihe BIM' nke na-eme ka omume kachasị mma yana ọhụụ BIM zuru ụwa ọnụ.
Onye ode akwụkwọ ahụ bụ Iain Miskimmin na-ekwu, «echiche ugbu a nke ụlọ ọrụ na ụwa dijitalụ na-akpali ọsọ ọsọ na-agbanwe agbanwe. Mana nkuzi anyi mutara na BIM Advance Academy na anyi n’etiti gi n’akwukwo a bu ezigbo mmalite mmalite nye ndi mmadu ma obu ulo obula nke choro ijide ma echiche di elu na nkowa nke BIM.
Dị ka utu aha nile na nchịkọta Bentley Press, BIM na asụsụ dị mfe Ebumnuche iji nye mmụta na-aga n'ihu nke na-enyere ma ụmụ akwụkwọ ma ndị nwere ahụmịhe nke ọrụ akụrụngwa aka ịbawanye ahụmịhe ha ma melite arụmọrụ ha n'ime arụ ọrụ ahụ.
Ọnụ ego dị oke mkpa nke ahụmịhe BIM bara uru na-enye aka n'akwụkwọ a dị mkpa ma dị ọnụ ahịa. BIM na asụsụ dị mfe dị ugbu a dị ka akwụkwọ e bipụtara na www.Bentley.com/books, nakwa dị ka Amazon eBook na iTunes.
Banyere Onye edemede na onye nchịkwa
Onye edemede Yain Miskimmin O jirila iri afọ abụọ na-arụ ọrụ n'ịkwado ihe onwunwe na ọrụ ụlọ, na-enyere aka ịkwalite ọrụ mbụ BIM na UK. Site na 2012, ọ kụziiri Crossrail / Bentley Information Academy na BIM Breakthrough Academy na London. Ọnọdụ a emewo ka ya na ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ 4.000 na-emekọrịta ihe site na gburugburu ụwa iji jide echiche na ahụmahụ ha na teknụzụ BIM, tinyere ụfọdụ n'ime ọrụ mmepe kachasị ukwuu n'ụwa. Ọ na-arụkọ ọrụ nke ọma na ngalaba BIM na UK ma na-eduzi Data Dictionary nke Akụrụngwa Akụrụngwa nke UK (IADD4UK).
Onye editọ Bill Hoskins Ọ bụ onye na-eme ihe ngosi maka afọ 25. N'oge a, ya na CAD (2D na 3D) malitere. Mmetụta a mere ka o nwekwuo ahụmahụ na ụlọ ọrụ kọmputa. Ọ mụtara ihe omume na Visual Basic na SQL na ịzụlite ọdụ data. O nyeere London 2012 aka iji dozie nrụnye nke nchekwa data ahụ nke debere akwụkwọ niile maka iwu nke Obodo Olimpik ahụ wee dezie usoro ndị otu ụlọ ọrụ na-eji arụ ọrụ a. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ onye ndụmọdụ nke mere ka e tinye ntọala London Underground nchekwa iji jide n'aka na ọ na-akwado BS 1192-2007.
Banyere ụlọ ọrụ Bentley Press
Ụlọ ọrụ Bentley Press bụ onye ndu ọmụma na akwụkwọ nke akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ọrụ ọkachamara maka ọganihu nke ịkebe, nkà na ụlọ (AEC), ọrụ, obodo ndị na-ahụ maka ụlọ na agụmakwụkwọ. Ihe omuma nke utu aha ya na-agụnye akwụkwọ ndị metụtara MicroStation, nyocha na mmepụta nke ụlọ, owuwu, ụzọ na saịtị, nhazi osisi, nhazi usoro na nhazi, na mmiri na mmiri ntancha mmiri - niile ndị ọkachamara dere ọzụzụ. Maka ama ọzọ banyere ụlọ ọrụ Bentley Press, gaa leta www.Bentley.com/books.
Previous Post«Previous Chọta map ma dezie ụzọ iji BBBike
Next Post Debe Bing Bing dị ka map ndabere na MicrostationNext »